Ubukhulu bukaHank Aaron, ngamanani - Mlb
Ubukhulu obuMangalisayo bukaHank Aaron, ngamanani
UHenry Hank Aaron ubhubhe ngolwe-Sihlanu, emva kobomi obugcweleyo kunye nobabalulekileyo kwimbali ye-Major League Baseball. UAron wayengukumkani obalekela ekhaya kunye nobuso belo franchise; Wayengumntwana osemncinci weeNigro Leagues owaphula irekhodi lezemidlalo phakathi kobuhlanga obothusayo .
UHank uAron wanyanzelisa iMelika ukuba itshintshe. Ayizange itshintshe ngokwaneleyo.
Ilifa lika-Aaron lidlulela ngaphaya kwezibakala kunye namanani, kodwa kumdlali oneerekhodi ezininzi kunye nemimangaliso yezibalo, bobabini basongelwe ngokungenakulinganiswa. Ke akukho. 44, nazi iinyani ezingama-44 kunye nezibalo ukuzama ukubandakanya umsebenzi ophucukileyo ka-Aron.
UHank Aaron wayeyiNkwenkwezi Yonke kumaxesha angama-21, Okuninzi nawuphi na umdlali kwimbali yeMLB.
Ufumene i-25 iyonke i-All-Star nods ngenxa yemidlalo emininzi kumaxesha athile-ikwangoyena ubalaseleyo.
Rhoqo ixesha lonyaka ukusukela ngo-1955 ukuya ku-1973-isithuba samaxesha ali-19-uAron wayeyiNkwenkwezi Yonke kwaye wayefumana iivoti ze-MVP.
Lakhe mbi Ukusebenza kwipleyiti kulo naliphi na kula maxesha kwafika ngo-1955, xa uAron oneminyaka engama-21 ubudala wathumela i-141 ye-OPS +, okuthetha ukuba ubethe iipesenti ezingama-41 ngcono kunomndilili weligi.
Ukujonga, i-OPS eyi-141 + luphawu lomsebenzi kaDavid Ortiz-kwaye leyo yayiyeyona nto imbi yokusebenza kuka-Aron kwisithuba esimalunga neminyaka emibini.
UAron, ewe, ungowesibini kwibhodi yabakhokeli ekhayeni lomsebenzi kunye ne-755 dingers, kwaye elona xesha lakhe lingalibalekiyo lafika xa waphula irekhodi elide likaBabe Ruth engenalo. 715.
UAaron ngokungenalusini akazange afike kuma-50 okubaleka ekhaya ngexesha elithile, okuthetha ukuba ukuthanda kukaBrady Anderson kunye noGreg Vaughn babethe elona xesha lakhe lilodwa.
Endaweni yoko, uAron wafikelela kuma-755 enkosi ngokungqinelana kwangaphambili kunye nokuphila ixesha elide. Wabetha ama-homers angama-40 kunye nezihlandlo ezisibhozo. (NguRute kuphela owayenokuninzi.)
Wabetha i-30-plus homers amaxesha ali-15. (Oko kubotshelelwe kakhulu, kunye no-Alex Rodriguez.)
Kwaye wabetha ama-20-plus homers amaxesha angama-20. (Yeyona nto ikhe yakhona.)
Nangona ikhaya lakhe lilonke liyimpumelelo ebonakalayo ka-Aron, wayeyi-superstar ejikeleze yonke into, ukuba ikho, iphantsi kojoliso olukhulu kwiibhola zakhe ezinde. Ngamaxesha awahlukeneyo kwikhondo lomsebenzi wakhe, uAron wakhokela iligi kwi-hits, ephindwe kabini, iihomere, iziseko ezongezelelweyo, ukuhamba ngenjongo, ukubaleka, i-RBI, ukubingelela iimpukane, ukubetha umndilili, ipesenti ye-slugging, kunye ne-OPS.
Ngokwe-Baseball-Reference's Umgangatho we-inki engwevu -Onika abadlali amanqaku okuphumelela okuphezulu kwe-10 kwiindawo ezahlukeneyo zekhadi le-baseball- u-Aaron ungowesibini phakathi kwabo bonke abadlali, emva kukaTy Cobb kuphela.
Esi mhlawumbi sesona sigwebo sika-Aaron sokugqibela: Susa yonke imitsi yekhaya lakhe, kwaye ngesele ekwi-3,000-hit club.
Ubethe ii-singles ezingaphezulu kukaWade Boggs.
Ubethe kabini ngaphezulu kukaCal Ripken Jr.
Ubethe kathathu ngaphezu kwawo nawuphi na umdlali okhoyo ngoku.
Ubambe iziseko ezingaphezulu kukaLarry Walker.
UAron uyinkokeli yomsebenzi kunye ne-1,477 eyongezelelweyo.
Ukwayinkokeli yomsebenzi kwiziseko ezipheleleyo, kunye ne-6,856-ngaphezulu kwama-700 ngaphezulu kwendawo yesibini uStan Musial. Ukhokelo lwakhe apha lukhulu.
Umsebenzi wenkokheli yekhaya u-Barry Bonds wayenokubetha ngaphezulu kwama-200 ekubalekeni kwamakhaya, kwaye ngesele eswelekile kwiziseko ezipheleleyo zika-Aaron.
Umsebenzi ophindwe kabini inkokheli uTris Somlomo wayenokubetha ngaphezulu kwama-800 aphindaphindiweyo, kwaye ngewayesaya kufutshane kwiziseko ezipheleleyo zika-Aron.
Inkokheli yeengoma ezingatshatanga uPete Rose wayenokubetha ii-singles ezingaphezulu kwe-1,100, kwaye ngesele eswelekile kwiziseko ezipheleleyo zika-Aron.
UAron waqhuba ngemitsi engama-2 297, eyona inkulu kwimbali yeMLB.
Ufumene imitsi engama-2 174, naye — ebotshiwe, ngokulingeneyo noRuth, kwindawo yesine kunabo bonke.
Ngaphandle kwebhokisi yebhola, u-Aaron wayekwangumbulali omkhulu. Uphumelele iigloves ezintathu zeGolide ngokulandelelana, kwaye ngewayephumelele ngaphezulu ukuba kungenjalo ngoWillie Mays noRoberto Clemente, (ngokufanelekileyo) owayephethe ukuvota kwe-NL ngaphandle kwelo xesha.
Izibalo eziphambili zokuzikhusela zincinci ngaphambi kwekhulu lama-21, kodwa uAron ivelele nangona kunjalo. Ngokwenkqubo ye-Total Zone, uAron ungomnye wabalishumi abalungileyo kwiirekhodi, kwi-98 yomsebenzi obaleka ngaphezulu komndilili.
UBill James kanye wabhala kaRickey Henderson, Ukuba ubunokumhlula kubini, ubuya kuba neeHolo ezimbini zeDumo. Kukwanjalo nango-Aaron, owadlala ngokwaneleyo kwaye wanexesha elide ngokwaneleyo kwimisebenzi emibini efanelekileyo kwiHolo. U-Aaron wayexabisa i-73.9 iphumelele ngaphezulu kokufakwa endaweni yakhe kwi-20s yakhe, kwi-Baseball-Reference nganye-yesixhenxe lonke ixesha.
Wayefanele ama-66.7 aphumelele ngaphezulu kokufakwa endaweni yakhe engama-30-yesihlanu lonke ixesha.
Ngaba kuphela komdlali phambi kwakhe kumashumi amabini eminyaka? URuth, onerekhodi yakhe yekhaya uAron waqhekeza kwi-40s yakhe.
Iitotali zomsebenzi ka-Aaron zinomtsalane kwinxalenye enkulu ngenxa yobomi bakhe obude. Njenge rookie, uAron wayenguye Umdlali wesine omncinci kwiLigi yeSizwe ngelo xesha.
Ngexesha lakhe lokugqibela, wayenguye Okwesibini kumdala kwi-AL , Ngasemva kuphela kukaMinnie Miñoso omkhulu, ovele kwimidlalo emithathu ngeli xesha lonyaka emva kweminyaka elishumi elinambini kude nezikhulu.
UAron wadlala kwiichungechunge ezintathu zokudlala, ngexesha apho wabhala khona .362 / .405 / .710 umgca we-slash. Abadlali kuphela abane ephezulu postseason OPS Kwindawo yokubonakala kwamacwecwe amaninzi nguRuth, uLou Gehrig, kunye noTroy Glaus.
Kwi-1957 World Series, u-Aaron wabetha .393 ngemidlalo emithathu yekhaya njengoko iMilwaukee yabetha iYankees kwimidlalo esixhenxe, iphumelela indebe yesixuku seHlabathi.
Uyinxalenye yamanqaku amnandi ngakumbi kunye neyokuqala. Kumdlalo ngoJuni 1961, uAron wayeyinxalenye ye-MLB's ikota yokuqala ukubuyela umva umva umva umva umzi ekhaya, kunye noEddie Mathews, uJoe Adcock, noFrank Thomas.
UAron wayengumdlali wokuqala ukufikelela kuzo zombini iiHolo ezifanelekileyo zokubetha i-3,000 kunye ne-500 yokubaleka ekhaya.
Angabaleka kwakhona: Wathabatha umhlala-phantsi nge-240 yomsebenzi owabayo kwaye wayengumdlali wesithathu kuphela, emva kukaKen Williams kunye neMays, ukuthumela ixesha le-30-30.
UHank noTommie Aaron babambe irekhodi lezona zininzi ziqhutywa ekhaya ngabazalwana ababini.
Njengamanqaku amaninzi amnandi, lo uxuba isiseko senyaniso kunye ne-twist elahlekisayo. UHank wabetha i-755 yalawo makhaya abalekayo; UTommie ubethe i-13.
Kwimiphanda engama-68 uAron ajongana nayo rhoqo kwikhondo lomsebenzi wakhe, wabetha ubuncinci kwaba kanye.
Oko kubandakanya ukusebenza okumileyo ngokuchasene nezona ndawo zibalaseleyo zexesha lakhe. Ubethe iimbaleki ezili-17-elona xabiso lakhe liphezulu ngokuchasene nayo nayiphi na ingqayi-ngaphandle kweHolo yeN Famer uDon Drysdale.
Wabetha uSandy Koufax waya .362 / .431 / .647 umgca we-slash.
Wabetha .342 / .395 / .630 ngokuchasene noSteve Carlton.
Wazabalaza ngokubanzi ngokuchasene noBob Gibson (.215 / .278 / .423) kodwa wabetha ekhaya ezisibhozo zibaleka iiCardinal ace, oyena mntu uGibson wavunyelwa ukuba abethe ngesandla sokunene.
Kwaye okokugqibela, masizisongele ngebali likaTom Hall. I-Southpaw yayiyimbiza entle ye-MLB, igqala elineminyaka eli-10 lamawele, iRed, iMets, kunye neRoyals ethathe umhlala phantsi nge-ERA engaphezulu. Wavumela ihomere engaphantsi kwesinye kwi-innings ezisithoba kwikhondo lakhe lomsebenzi, inqanaba lenkwenkwezi. Kodwa uAron wayikhathaza le ndoda. Ngo-1972, iHolo yajongana no-Aaron oneminyaka engama-38 ubudala izihlandlo ezisixhenxe; iHammer yenza ukuphuma kabini kodwa yahamba kabini yaza yabetha iimbaleki ezintathu zasekhaya. Ngexesha elilandelayo, iHolo ibone ngokwaneleyo kwimbali yokuphila: Wajongana noAron izihlandlo ezithathu kwaye wamhamba bobathathu. Kwixesha elilandelayo emva koko, baphinda-phinda-kwaye uHolo waphinda wamhamba. Kwisithuba esingaphezulu kwamashumi amabini eminyaka, uAron wohlwaya imijelo kwiHolo yeeNzalo nakwixesha elizayo, emva kokubethwa emva kokungqubana kwemetronomic. Kukho amanqaku amaninzi kakhulu onokukhetha kuwo. I-baseball ilahlekelwe ngumqondiso.
iingoma malunga nolwalamano oluphela
iinkuni 99 eziqhwalelayo bizkit
Elona xesha lide lenjongo
I-warren zevon inexabiso elifanelekileyo